Erayada Robert Kiyosaki: 50-ka weedho ee Robert Kiyosaki ugu fiican iyo in ka badan | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Waqtigaan la joogo, mid ka mid ah maskaxda dhaqaalaha weyn waa Robert Kiyosaki, oo hantidiisa ay ku dhowdahay $ 100 milyan. Dhaqaalayahankan, ganacsadaha iyo qoraa wuxuu noqday maal-galiye saameyn ku leh sannadihii uu soo bartay iyo waayo-aragnimadiisa. Sidaas darteed, Weedhaha Robert Kiyosaki waxaa ka buuxa xigmad, taas oo aan kugula talineyno inaad fiiriso iyaga.
Maqaalkan waxaan ku qoreynaa 50ka weedho ee ugu wanaagsan Robert Kiyosaki. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ka hadli doonnaa buuggiisa "Aabbe Taajir ah, Aabbo Sabool ah" iyo Quadrant qulqulka Lacagta
1 50ka weedhood ee ugu fiican Robert Kiyosaki
2 Aabe qosol ah, aabbe sabool ah
3 Rubuca lacagta qulqulaya
50ka weedhood ee ugu fiican Robert Kiyosaki
Dhaqaaleyahanada waaweyn badanaa waxay urursadaan sannado iyo sannado khibrad iyo aqoon ah. Sidaa darteed, weedhaha Robert Kiyosaki Iyagu waa ikhtiyaar wanaagsan oo ay ku bartaan kuna milicsadaan adduunka dhaqaalaha iyo istiraatiijiyaddeenna.
Khasaarayaasha way quustaan ​​markay fashilmaan. Ku guuleystayaasha ayaa guuldareysta ilaa ay guuleystaan. "
Nolosha dhabta ah, dadka ugu caqliga badan waa kuwa khaladaadka sameeya waxna ka barta. Dugsiga dhexdiisa, dadka ugu caqliga badan waa kuwa aan khaladaad samayn.
"Markaad gaarto soohdinta waxaad ogtahay, waa waqtigii aad khaladaadka qaarkood samayn lahayd."
“Dadka nolosha ugu guusha badan waa kuwa su’aalaha weydiiya. Had iyo jeer wax bay baranayaan. Had iyo jeer way korayaan. Had iyo jeer way riixayaan. "
“Dadka aan dhaqaalaha haysan ee dhagaysta khubarada maaliyadeed waxay la mid yihiin ereyada oo kaliya raacda hogaamiyahooda. Waxay ku ordaan buurta oo ay galaan badweynta hubaal la'aan dhaqaale iyagoo rajeynaya inay u dabaashaan dhinaca kale. "
"Sababta ugu weyn ee dadka ay u haysato dhibaatooyin dhaqaale waa inay aqbalaan talooyinka xagga dhaqaalaha ee dadka saboolka ah ama kuwa wax iibiya."
Awoodda iibinta waa lambarka koowaad ee ganacsiga. Haddii aadan iibin karin, ha isku mashquulin inaad ka fikirto noqoshada milkiile ganacsi.
«Way fududahay in lagu istaago tarabuunka, la dhaleeceeyo, oo la dhaho waxa qaldan. Fadhiyada waxaa ka buuxa dad. Ciyaar hel. "
Jacaylka lacagtu ma xuma. Waxa xun waa lacag la’aan.
«Dhibaatada dugsiga ka jirta waxay tahay inay ku siiyaan jawaabaha ka dibna ay ku siiyaan imtixaanka. Noloshu sidaas maahan. "
«Sameynta qalad kuma filna inay kaa dhigto mid weyn. Waa inaad qirataa qaladaadka oo aad wax ka barataa si aad ugu rogto faa'iidadaada. "
Inaad ka dacwooto xaalada aad hada ku sugan tahay nolosha waa wax aan faa'iido lahayn. Beddelkeed, istaag oo wax ka beddel iyada. "
Adduunyada maanta sida xawliga ah ku socota, dadka aan halista gelin ayaa ah kuwa qatar dhab ah galaya.
Cabsida ah kala duwanaanta waxay dad badan ka celineysaa inay raadiyaan habab cusub oo ay ku xaliyaan dhibaatooyinkooda.
“Way fududahay in aad sii ahaato sidaad tahay, laakiin ma sahlana in la beddelo. Dad badan ayaa doorta inay isku mid ahaadaan noloshooda oo dhan. "
Guuleystayaasha kama baqayaan in laga badiyo, kuwa qasaarana waa kuwa. Guul darradu waa qayb ka mid ah geeddi-socodka guusha. Dadka ka fogaada guuldarada sidoo kale way ka fogaadaan guusha. "
“Kuwa hodanka ah waxay iibsadaan raaxo xilli dambe, halka dabaqadda dhexe ay badanaa iibsadaan raaxada marka hore. Sababta Anshaxa anshaxa. "
"Haddii aad sii waddo wixii ay hooyo iyo aabbe kuu sheegeen (iskuul aado, shaqo hel oo lacag badbaadi) waad lumineysaa."
Mararka qaar waxa saxda ah bilowga noloshaada ma ahan dhamaadka noloshaada.
“Sida caadiga ah, lacagta aad badato, lacagta aad isticmaasho ayaa ka badan. Taasi waa sababta inbadan aysan taajir kaaga dhigeyn. Waa hantida kaa dhigi doonta inaad taajir noqotid. "
Bilaabida ganacsi waxay la mid tahay ka soo boodbood diyaarad aan baarashuud ah. Markay tahay ganacsaduhu wuxuu bilaabayaa inuu sameeyo baarashuud wuxuuna sugaa inta uu furan inta uusan dhulka ku dhufan. "
Ereyga adduunka ugu halaagga badan waa 'berri'.
“Si aad ugu guuleysato ganacsiga iyo maalgashiga waa inaad ahaataa mid dareen ahaan dhexdhexaad ah si aad u guuleysato oo aad u lumiso. Guul iyo guuldarro waa qeyb ka mid ah ciyaarta.
Jacaylku waa bilowga guusha.
"Kuwa hodanka ahi waxay diiradda saaraan tiirarka hantida, halka dadka kale oo dhami ay diiradda saaraan dakhliga soo gala."
«Dadka ugu guusha badan waa kuwa aan is-beddel-doonka ahayn oo aan ka baqayn inay weydiiyaan sababta? marka qof walba u maleeyo inay iska cadahay. "
"Qaybta ugu adag ee isbeddelka waxay maraysaa meel aan la aqoon."
Sugitaanku wuxuu cunaa tamartaada. Ku-simaha wuxuu abuuraa tamar.
Dad badan waxay rabaan adduunka intiisa kale inay iyagu is beddelaan. Aan wax kuu sheego, way sahlan tahay inaad naftaada bedesho adduunka intiisa kale. "
"In badan oo qofku raadinayo nabadgelyo, waxa sii badanaya inuu ka quusto inuu xakameeyo noloshiisa."
Waxaan ka walaacsanahay dadka oo dhan ee xoogga saaraya lacagta oo aan u jeedin hantidooda ugu weyn, taas oo ah waxbarashadooda. Haddii dadku isu diyaariyaan inay noqdaan kuwo dabacsan, maskax furnaan leh oo waxbarta, waxay hodan ka noqon doonaan isbeddelada. Haddii ay u maleynayaan in lacagtu ay xallin doonto dhibaatooyinkooda, waxaan ka baqayaa inay yeeshaan waddo adag.
«Qorshuhu wuxuu buundo u yahay riyadaada. Shaqadaadu waa inaad sameyso qorshaha ama buundada dhabta ah, si riyadaadu u rumowdo. Haddii waxa kaliya ee aad sameyso ay tahay inaad ku nagaato bangiga adigoo ku riyoonaya dhinaca kale, riyadaadu waxay noqon doontaa riyooyin weligood.
"Inbadan oo aan khatar ugu jiro in lay diido, waxaa sii badanaya fursadahayda in lay aqbalo."
“Marar badan waxaad ogaan doontaa inaysan ahayn hooyadaa ama aabbahaaga, ninkaaga ama xaaskaaga, ama carruurta ay dib kuu hayaan. Ma tahay adiga Jidkaaga uga bax.
Waxaan arkaa dad aad u tiro badan oo silcaya oo si adag iyo si ka adag u shaqeynaya sababtoo ah waxay ku dhegan yihiin fikrado hore. Waxay rabaan inay wax noqdaan sida ay ahaayeen, waxay diidaan isbedelka. Fikradaha hore ayaa ah mas'uuliyadda ugu weyn. Waa mas'uuliyad sababtoo ah ma ogaanayaan in fikraddan ama qaabkan wax lagu qabanayo ay shalay shaqeysay, shalay waa tagtay. "
'Qof kasta ayaa kuu sheegi kara halista. Ganacsade ayaa arki kara mushaharka.
Mustaqbalkaaga waxaa lagu abuuray waxa aad maanta sameyso, ma ahan berri. "
«Go'aannadaadu waxay calaamadeeyaan aakhiradaada. Waqti qaado si aad u gaarto go'aannada saxda ah. Haddii aad khalad samayso, waxba ma dhacaan; wax ka baro oo ha ku celin. »
Waligaa ha oran ma awoodid wax. Taasi waa dabeecad xumo. Is weydii sida aad u awoodi karto.
"Xilliga aad go'aansato inaad abuurto faylalka tacliimeed ee aan caadiga ahayn, noloshaadu way is beddelaysaa."
Iskuulka waxaan ku baranay in khaladaadka ay xun yihiin, waxaa nalagu ciqaabayaa sameynta. Si kastaba ha noqotee, haddii aad eegto sida aadanaha loogu talagalay in wax loo barto, waa qaladaad. Waxaan barannaa inaan ku soconno dhicitaan. Haddaanan waligeen dhicin, weligeen ma socon lahayn. "
"Waxaad sameyn doontaa khaladaadka qaar, laakiin haddii aad wax ka barato, khaladaadkaasi waxay isu beddelayaan xigmad, xigmadduna waxay muhiim u tahay taajirnimada."
Farqiga u dhexeeya taajiriinta iyo faqiirka ayaa ah tan: kuwa hodanka ah inay maal gashadaan lacagtooda isla markaana ay isticmaalaan wixii haray. Ninka saboolka ahi wuxuu lacagtiisa ku bixiyaa wixii ka soo harayna wuu maalgashadaa.
“Hantida ugu muhiimsan ee aan haysanno waa maskaxdeenna. Haddii aad si fiican u tababaran tahay, waxaad ku abuuri kartaa hanti aad u tiro badan oo u muuqata sida ugu dhaqsaha badan. "
"Haddii aad rabto inaad ku guuleysato xorriyad dhaqaale waa inaad noqotaa qof ka duwan sida aad hadda tahay oo aad iska dhaafto wixii kugu hakinayay xilliyadii lasoo dhaafay."
«Soo hel ciyaarta aad ku guuleysan karto oo aad naftaada ugu ballanqaadi karto inaad ku ciyaarto; ciyaaro si aad u guuleysato. "
Kaliya waxaad tahay sabool hadaad quusato. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad wax qabatay. Dadka badankood waxay hadlaan oo ku hamiyaan inay taajir noqdaan. Wax baad qabatay.
“Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan dadka isku daya waxyaabo cusub oo qaladaad sameeya ayaa ah in qaladaadka oo la sameeyo ay kaa dhigeyso inaad is-hoosayso Dadka is-hoosaysiiyaa wax bay ka bartaan in ka badan dadka aan aqoonta lahayn. "
Caadifaduhu waxay inaga dhigaan dad. Run ayey naga dhigayaan. Ereyga dareen wuxuu ka yimid tamar dhaqdhaqaaq. Daacad u noqo shucuurtaada oo maskaxdaada iyo shucuurtaada u isticmaal dantaada, oo ha ku diidin. "
Caqliga ayaa xaliya dhibaatooyinka isla markaana lacag sameeya. Lacagta aan lahayn sirdoonka maaliyadeed waa lacag si dhaqso leh lagu waayo. "
Aabe qosol ah, aabbe sabool ah
Weedhaha Robert Kiyosaki maahan waxa kaliya ee dhaqaalayahanku noo soo bandhigo si aan wax badan uga ogaano, buugiisa "Aabbaha Qaniga, Aabaha Saboolka ah" ayaa aad loogu talinayaa. Gudaha waxay muujineysaa dabeecadaha kala duwan ee qofku ku yeelan karo lacagta, shaqada iyo xitaa nolosha. Mawduucyada ugu waaweyn ee ku xusan buugan maaliyadeed waa kuwan soo socda:
Farqiga u dhexeeya shirkadaha iyo shakhsiyaadka: Shirkaduhu waxay marka hore bixiyaan wixii ay ku bixin lahaayeen ka dibna waxay bixiyaan canshuuraha. Taa baddalkeeda, shakhsiyaadka ayaa marka hore bixiya canshuuraha ka hor inta aysan kharash gaarin.
Helitaanka shirkadaha: Waa hay'ado macmal ah oo qof walba u adeegsan karo. Si kastaba ha noqotee, dadka saboolka ahi guud ahaan ma yaqaanaan sida loo helo ama ma helaan marin.
Ahmiyadda waxbarashada maaliyadeed.
Rubuca lacagta qulqulaya
Markaan ka hadleyno afar-laboodka socodka lacagta, waxaan ula jeednaa nidaam lagu falanqeeyo qaababka maskaxeed ee dadka heer dhaqaale. Sida laga soo xigtay Robert Kiyosaki, waxaa jira wadar ahaan afar maskax oo kala duwan markay tahay lacag sameynta. Wuxuu ku qeexayaa iyaga oo jaantus ah qaabkiisuna yahay udub dhexaad Cartesian ah oo leh afar afar geesood:
Shaqaalaha (E): Waxaad ku kasbataa lacag qaab mushahar ah, taas oo ah, inaad qof kale u shaqeyso. Dhinaca bidix ee afar geeslaha.
Iskaa u shaqeysto (A): Hano lacag adigu ushaqeyso. Dhinaca bidix ee afar geeslaha.
Milkiilaha ganacsiga (D): Wuxuu leeyahay ganacsi isaga lacag ka sameeya. Dhinaca midig ee afaraad.
Maalgaliye (I): Waxaad lacagtaada u dhigataa inaad isaga ugu shaqeyso iyada oo loo marayo maalgashi. Dhinaca midig ee afaraad.
Dhamaanteen waxaan ka tirsanahay mid ka mid ah afartaan quad. Intooda badan kuwa dhanka bidix waa faqiir ama waxay katirsanyihiin dabaqada dhexe, halka kuwa dhanka midigna ay yihiin kuwa qaniga ah.
Waxaan rajeynayaa in xigashooyinka Robert Kiyosaki ay kaa caawiyeen inaad ku korto dhanka istiraatiijiyadaha maalgashiga iyo maskaxda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Xigasho Robert Kiyosaki
Waa maxay dhaqaalaha